Muuri News Network » DEG DEG: Duqeymo Dad Iyo Duunyo Lagu Xasuuqay Oo Ka Dhacay Sh/Hoose
DEG DEG: Duqeymo Dad Iyo Duunyo Lagu Xasuuqay Oo Ka Dhacay Sh/Hoose
Wararka aan ka heleyno deegaan lagu Magacaabo Abiikaroow oo qiyaas ahaan 4 Km dhinaca Koonfureed kaga beegaan Deegaanka Shalanbood ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Ayaa sheegaya in halkaasi ay Saacadihii la soo dhaafay duqeyn Madaafiic ah ay ku garaaceen cutubyo ka tirsan AMISOM oo la xaqiijiyey in fariisin ay ku lahaayeen deegaanka Baladul Amiin oo sidaa aan ugu fogeen deegaanka Shalanbood ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Duqenta Madaafiicda ayaa waxaa la soo sheegayaa in khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaray dad xoolo dhaqato ah oo ku sugnaa halkaasi.
Shacabka Deegaanka Shalanbood ee Gobolka Shabeelaha Hoose oo la hadlay Wakaalada Muurinews ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in duqeynta ay ku hanti beeleen dad xoolo dhaqato ah islamarkaana ay geysatay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac wuxuuna carabka uu ku dhuften in 2 Ruux oo shacab ah ay ku geeriyootay halka ku dhawaad 200 neef halkaas ku geeriyoodeen, isagoo shaaca ka qaaday in AMISOM ay kala hadleen arrimahaasi.
Dhinaca kale mid ka mid ah dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee deegaankaasi ku dhaqan oo Muurinews.com la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey qaabka deegaanka wax ay ugu dhaceen wuxuuna tilmaamay in ay jiraan khasaarooyin badan oo soo gaaray dadka Deegaanka.
Mudooyinkii danbe Ciidamada AMISOM ayaa xiliyada habeenkii ah duqeyn xoogan ka geysanayey deegaano iyo degmooyin ka tirsan Shabeelaha Hoose iyadoo ay Xusid Mudan tahay in Khasaaraha ugu badan dad Shacab ah uu soo gaaray.